Guri | GLAMOR
Soo saaraha laydhka Xirfadlaha ah tan iyo 2003
Kirismaska ??Motif Light
Hoggaamiyo Strip Lights
iyakana hayalka san
Hoggaamiyo Flood Light
Glamour wuxuu leeyahay seddex taxane oo wax soo saar oo waaweyn ah, Nalalka qurxinta ee loo yaqaan 'LED', nalalka xargaha ee 'SMD' iyo waxyaabaha iftiimiya.
Nalalka qurxinta ee loo yaqaan 'Glamour LED' ayaa loo aqoonsan yahay inay yihiin alaabooyin heer sare ah oo ka socda warshadaha iftiinka qurxinta.
Qaybaha wax soo saarka waxaa ka mid ah nalalka xargaha laydhka, laydhadhka xargaha, laydhadhka istiraatiijiga ah, nalalka qurxinta iyo alaabada qurxinta ee caqliga leh
Waxyaabaha loo yaqaan 'Glamour SMD' waxaa ka mid ah nalalka xargaha ee loo yaqaan 'Dimetric led light', Ultra Soft led led, Crystal Jade led led strip and led neon flex. Jilicsanaanta iyo gacan yar oo aad u yar oo qalloocan ayaa ah astaamaha u gaarka ah alaabada Glamour SMD.
Waxyaabaha soo baxa ee Iftiiminta (Glamour Illumination) waxaa ka mid ah nalalka isku-dhafan ee aluminium-caag ah oo isku-dhafan sida sheyga nalalka gudaha, nalalka waddooyinka, nalalka daadadka sida alaabooyinka nalalka banaanka, iyo nalalka waddooyinka ee qoraxda, nalalka daadka sida waxyaabaha tamarta cusub.
Laydhka Qurxinta Ilayska
Iftiiminnada iftiinka ilayska LED-ka ayaa ku jiray warshadaha muddo 18 sano ah. Qeybahayaga wax soo saarka waxaa ka mid ah nalka xariga ah ee loo yaqaan 'LED string light', xargaha xargaha ee LED, nambarka neon flex, nalka SMD, nalalka LED, nalka mowfiidka iwm Waxyaabaha ugu waa weyn ayaa helay CE, GS, CB, UL, cUL, ETL, CETL,
Nalalka Iftiinka Iftiinka 'LED Strip Light'
Iftiiminta Iftiiminta Iftiimiyaasha Iftiimiyaha Iftiimiyadu marwalba waxay diiradda saaraan hagaajinta tayada iyo hubinta. Waxqabadka wanaagsan ayaa ku guuleystay sumcado iyo amarro badan oo adduunka ah. Waxaan aaminsanahay kaliya "iftiinka tayada leh" inuu caymi karo "nolol tayo leh".
Alaabooyinka tamarta ee cusub waxaan si gaar ah diiradda u saareynaa dhammaanteenna hal barnaamij oo ku saabsan tamarta qorraxda ee SL01, caqli iyo badbaadin tamarta.
Alaabada iftiinka Gudaha
Iftiiminta Iftiiminta Iftiinka gudaha ee inta badan isku-darka iftiinka nalka LED-ka leh nalka dhinaca iyo nalka dambe; Iftiinka dhinaca waxaan heysannaa taxanaha SPL, taxanaha NPL iyo NSF, nalka gadaal waxaan leenahay taxanaha ADL, taxanaha DLC, taxanaha EDL iyo taxanaha RDL; Intaa waxaa dheer, taxanaha ADL waa kuwo goyn kara; SPL, DLC & taxanaha EDL waa 2 oo ah 1 naqshadeyn, isbadal fudud ayaa dib loogalaabashadaa dusha sare.
Kooxda Xirfadlayaasha iyo Qalabka
In ka badan 30 injineero sare iyo nashqadeeyayaal ka shaqeeya Glamour hadda. Ku qalabaynta qalab tijaabo ah oo horumarsan, waxaan soo saarnay oo qaabeynay taxane ah badeecado hogaaminaya warshadaha kuwaas oo buuxiya shuruudaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan ee ka kala yimid gobolada iyo wadamada kala duwan, waxaana helnay ilaa iyo 80 shati illaa iyo hadda.
Glamour sidoo kale waxay leedahay taxane ah khadad wax soo saar si otomaatig ah u wada shaqeeya, sida mashiinada alxanka tooska ah, makiinadaha buuxinta xabagta, mashiinada wax lagu shiro, mashiinada SMT, mashiinada wax lagu shubo, mashiinada goynta, mashiinada tijaabada gabowga iyo in ka badan 300 nooc oo ah qalabka baaritaanka oo na hubin kara awoodda wax soo saarka si ay ula tacaalaan amarro badan oo si fudud uga yimaada noocyada caanka ah ee adduunka oo idil.
La aasaasay 2003, Glamour waxaa ka go'an cilmi baarista, soo saarista iyo iibinta nalalka qurxinta ee loo yaqaan 'LED', nalalka guryaha, nalalka dhismaha banaanka iyo nalalka waddooyinka tan iyo aasaaskeedii.
Waxay ku taal Magaalada Zhongshan, Gobolka Guangdong, Shiinaha, Glamour waxay leedahay 40,000 mitir murabac oo wax soo saar warshadeed oo casri ah, iyada oo in ka badan 1000 shaqaale ah iyo awood wax soo saar bille ah oo ah 90 40FT konteenar
Ku dhowaad 20 sano 'waayo-aragnimo ah oo ku saabsan berrinka LED, dadaallada adkeysiga ee dadka Glamour& Taageerada macaamiisha gudaha iyo dibaddaba, Glamour wuxuu noqday hogaamiyaha warshadaha nalalka qurxinta qurxinta LED-ka. Soojiidashada waxay dhameystireen silsiladda warshadaha LED-ka, uruurinta ilo kala duwan oo horudhac ah sida qashin LED, encapsulation LED, wax soo saarka nalalka LED, soosaarida qalabka LED
Cilmi baarista teknolojiyada LED.
Dhammaan alaabada Glamour waa GS, CE, CB, UL, cUL, ETL, CETL, SAA, RoHS, REACH waa la oggolaaday. Dhanka kale, Glamour waxay heleen in ka badan 30 shati illaa iyo hadda. Soojiidashada ma aha oo kaliya shirkadaha Shiinaha u qalma, laakiin sidoo kale waa shirkad aad loogu kalsoon yahay shirkado badan oo caalami ah oo caan ah oo ka socda Yurub, Japan, Australia, Waqooyiga Ameerika, Bariga Dhexe iwm.
NAGU SOO DHAWOW
Kaliya ku dhaaf emaylkaaga ama lambarkaaga taleefanka foomka xiriirka si aan kuu soo diri karno sicir bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeyntayada ballaaran!